I-China Fused Silica Powder Umkhiqizi Nomphakeli | I-Dinglong
I-Dinglong fused silica powder iyimpuphu ehlanganiswe ngogesi ephezulu ye-silica powder ekhiqizwa eDinglong Fangshan Industrial District fusion kanye nendawo yokucubungula. I-silica powder yethu ehlanganisiwe iyatholakala kuzo zombili izinhlayiya ezijwayelekile nezingokwezifiso nokusabalalisa.
Ukuqina kwevolumu ephezulu kanye ne-coefficient yokunwebeka okuphansi kakhulu
Ikhishwe eDinglong Fangshan Industrial District fusion and processing facility
Kutholakala ngosayizi kanye nokusabalalisa okujwayelekile nokwenziwe ngokwezifiso kwezinhlayiya
I-Dinglong fused silica powders ingama-99.98% amorphous. I-chemistry ye-silica powder ehambisanayo yenza kube yinto eguquguqukayo yezicelo zokuphikisa, ze-elekthronikhi nezesisekelo. Le mikhiqizo ye-silica ehlanganisiwe yenziwa ngenqubo yokuncibilika kagesi okuthuthukile okulandelwa ukugaya ngokunemba kanye nosayizi, okuqinisekisa ukuthi izimpushana ziyafana ekubunjweni kwamakhemikhali, ukwakheka kwesigaba nokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana. Imikhiqizo yethu ye-silica ehlanganisiwe yenziwa eFangshan Industrial District, lapho izinqubo zokukhiqiza zenzelwe ukuvumelana nokuthembeka. UDinglong ukholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasiza inkampani ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi yakhe ukubambisana okujulile namakhasimende ethu.
Imibhoshongo ye-silika ehlanganisiwe ye-Dinglong iyatholakala kuzo zombili izinhlayiya ezijwayelekile nezingokwezifiso nokwabiwa. Ochwepheshe bethu bazosebenza nawe ukwengeza uhlelo lwakho lokusebenza. Izinhlayiya ze-silika ezifakiwe ze-Dinglong ziyatholakala kuma-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Le mpuphu ehlanganisiwe yesilika yenziwe esikhungweni esiqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Ngeminyaka engama-30 yokusungulwa, uDinglong uzuze ukusekelwa okuqinile kwemishini nobuchwepheshe futhi waqongelela okuhlangenwe nakho okukhulu ngokukhiqiza izinto ezinhle ze-quartz. Izinqubo zethu zokukhiqiza zenzelwe ukuvumelana nokwethembeka - kusiza ukuqinisekisa ikhwalithi nomkhiqizo onokwethenjelwa. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasisiza ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi sakhe ukuthembana nobungani namakhasimende ethu.
Langaphambilini Izinto ezihlanganisiwe ze-Silica Flour Refractory
Olandelayo: Ufulawa weSilica
I-Crystalline Silica Powder
Ukudla Ibanga Silica Powder
I-Micro Silica Powder
I-Organic Silica Powder
I-Silica Gel Powder